Home Wararka DEG DEG:Kulankii Golaha Shacabka oo baqday
DEG DEG:Kulankii Golaha Shacabka oo baqday
Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta lagu waday in ay kulan ku yeeshaan magaalada Muqdisho,Waxaa baaqday kulankaasi Sababo la xariira Kooram La’aan.
Xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay lagu wargeliyay inuu jiro kulanka baarlamaanka maanta oo Arbaco ah, islamarkaana ajandaha kulanka uu yahay sii wadista ka doodista xeer hoosaadka baarlamaanka.
Kulanka ayaa lagu waday in uu shir guddoomiyo gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa waxa ay sheegeen in ay nasiib daro tahay in maanta uu baaqdo kulanka Golaha Shacabka Sababo la xariiira Kooram La’aan.
Previous articleAqriso:Gaas oo raali galin ka bixiyay hadal uu ka Carooday Shariif xasan,
Next articleDad gaaraya 7 Ruux oo lagu Xukumay Putland
Banaan Bax Xoogan oo Loga So Hor Jeedo Tacadiyada Dowlada oo...
Madaxweyne Farmaajo oo Maanta u dhoofaya Adis-ababa!!